CeleLove - Page2of 179 - Welcome From Cele Love
ကိုအောင်ကြီးပထမဆုံး တရားရုံးထုတ်အခြေအနေ ကိုအောင်ကြီးအဖေပြောပြချက်နှင့်ရှေ့နေပြောပြချက်များ……..
ကိုအောင်ကြီးပထမဆုံး တရားရုံးထုတ်အခြေအနေ ကိုအောင်ကြီးအဖေပြောပြချက်နှင့်ရှေ့နေပြောပြချက်များ…….. နေပြည်​​တော်​ wisdom hill မူကြိုကျောင်းမှ ကျောင်းသူက​လေးငယ်​ ဗစ်​တိုးရီးယား မဖွယ်မရာပြုကျင့်ခံရမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး တရားစွဲဆိုထားတဲ့ ကိုအောင်ကြီးကို ဇူလိုင် ၁၅ ရက်နေ့က ရုံးထုတ်ခဲ့ပေမယ့် စစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးဘဲ လာမယ့် ၂၄ ရက်နေ့ ရုံးချိန်ရမန်ယူခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ် …. . ။ […]
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရှေ့နေများမှ ဗစ်တိုးဒီးယားလေးအတွက် စတင်လှုပ်ရှားတော့မည်
မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာ ရှေ့နေများမှ ဗစ်တိုးဒီးယားလေးအတွက် စတင်လှုပ်ရှားတော့မည် Victoria လေးရဲ့ အမှုအတွက် အမှန်တရား ဖော်ထုတ်ရေး စတင်လှုပ်ရှားမည်ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံလုံး ဆိုင်ရာလွတ်လပ်သော ရှေ့နေများအသင်းချုပ် ထုတ်ပြန် ခဲ့ကြောင်း သိရသည် … ။ သတင်းထုတ်ပြန်ချက်၎/၂၀၁၉ (၁) နိုင်ငံတဝှန်းလုံးတွင်သမီးငယ်လေး Victoria ၏အမှု၊ အမှန်တရားပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် စိုးရိမ်စိတ်များ […]
မိန်းမ​ရွေးနည်း..အနုပညာ.. မိန်းမ​ရွေးနည်း..အနုပညာ ..!! မိန်းမယူတဲ့အခါ ယူမယ့်​မိန်းမထက်​ ယောက္ခမကို အရင်​ကြည့်​ပါ …. ။ နှုတ်​ခမ်းပြာ​နေတဲ့မိန်းမကို မယူမိ​စေနဲ့ …. ။ မင်းရှာနိုင်​တုန်း ​ကောင်းလိမ့်​မယ်​ ….. ။ မရှာနိုင်​တဲ့တစ်​​နေ့ ထမင်းအိုး​မှောက်​ထားတတ်​တယ်​​ …. ။ နဖူးက​မောက်​ ၊ ဖင်​က​ကောက်​ ၊ဖ​နောင့်​တို​နေတဲ့ […]
“လူကြည့်များပြီး ဝေဖန်ခံနေရတဲ့ MasterCher Myanmar ဒိုင်လူကြီးရဲ့ လုပ်ရပ်” အားပေးထောက်ခံတဲ့သူရှိသလို သဘောမတူတဲ့သူတွေလည်းအများအပြားရှိနေကြပါတယ် …. ။ ဒိုင်တွေရဲ့ ဝေဖန်သံတွေကလည်း မြန်မာလူမျိုးတစ်ယောက်အနေနဲ့ မဖြစ်သင့်ဘူး ရိုင်းတယ်လို့ ထင်တဲ့သူတွေလည်း များစွာရှိပါတယ်… ထွန်းကျော်ဦးဖန်တီးခဲ့တဲ့ ဟင်းပွဲပုံစံကို စားသောက်ဆိုင်ကိုသွားတဲ့အခါ သူကိုယ်တိုင်ဝယ်စားချင်နိုင်မလား ဆိုပြီး မေးခွန်းထုတ်ခံရသလို…. အမှိုက်ပုံထဲကိုလည်း သွန်ပစ်ခဲ့တဲ့အတွက် […]
Victoria လေးရဲ့ DNA နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှဦးဆောင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်
Victoria လေးရဲ့ DNA နဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘာမှဦးဆောင်မလုပ်ပါဘူးဆိုတဲ့ ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ် လတ်တလော မြန်မာနိုင်ငံမှာ ရေပန်းစား လူသိများနေတဲ့ သတင်းတွေနဲ့ပတ်သတ်ပြီး သရုပ်ဆောင် ထွန်းအိန္ဒြာဗိုလ်က ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးကို တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်..Victoria အမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး သူမခင်ပွန်းက နိုင်ငံခြားထွက်ပြီး DNA စစ်မယ်ဆိုတဲ့ကိစ္စနှင့် ပတ်သတ်ပြီး အဲ့ဒါကမဟုတ်ပါဘူး၊ သမီးချင်းကိုယ်ချင်းစာပြီး မခံချင်စိတ်လေးဖြစ်လာလို့ ရေးလိုက်တာပါ။ […]